Articles Archives - Sunuwar.org
Posted by: uttam Kaatich | on November 17, 2021
नजिकको देउता हेला : नोब्लाले झस्कायो ।
जब हामी (सुनुवार सेवा समाज सचिवालय समूह) कोइँच किपटीय मुखिया तथा पुर्व प्रधानपञ्च चन्द्रबहादुर सुनुवारको प्रस्तर सालिक अनवरनको लागि रामेछापको लिखुतामाकोशी १ सा्ब्ला कुपिन्डे पुगियो अनयसै फर्किँदा नोब्रा लेक हुँदै फर्किने सल्लाह भयो ।
कार्तिक ३० गते । जगमनेडाँडामा मुखिया चन्द्रबहादुरको सालिक अनुवरण बजार बसेको थियो । उहिले एकराते बजारको सम्झना गराउँथ्यो । सबै सहभागीहरु नाचगानमा स्वःस्फुर्त सहभागी थिए । तस्वीरमा भेटी चढीरहेकै थियो । अझै पनि मुखियाप्रति आस्था घटेको थिएन । वास्तवमा कोइँचको मुखिया अन्य मुखिया जस्ता शोसकी मुखिया थिएनन् । धेरैको सोँचाइ हुन्छ मुखिया भनेको रैती मारा हुन्छन् । तर वास्तममा मुखिया शब्दमा घोत्लिनु अलिकति न्याय हुन्छ होला । मुखिया चार किसिमको पाइन्छ १. थर मुखिया : तराइको विन, कुमाल, मगर (सुनेको) को थर मुखिया हुन्छ । २. मालअड्डा अर्थात् सरकार अफिसको मुखिया : सरकारी काम गर्ने मालअड्डामा मुखिया पद हुनेगर्छ अहिले यो पद खारेज भइसक्यो । ३. ठेकेदार वा छपेली मुखिया : अहिलेको पार्किङ शुल्क उठाउने वा बालुवा खनी निकाल्ने ठेकेदार जस्तै जग्गाको तिरो (कर) उठाउने छपेली मुखिया । यी मुखियाहरुमा जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व हुँदैन । काेइँच किपटमा आएर मुखिया बनेका अन्य जातिकाे मुखिया वा अन्य ठाउँका मुखिया । ४. किपटीय मुखिया : परापूर्वकालदेखि जंगल खोरिया फाँडेर मानिस बस्न लायक बनाउने आदिवासी पहिलो बासिन्दाको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न समुहले चुनेको चक्रीय प्रणाली अनुसार नीति नियाम कार्यान्वयन गराउने किपटीय मुखिया । यस्ता मुखियाले नराम्राे जनता मारा काम गरे दाजुभाइ मिलेर मुखिया खाेसेर अरुलाइ सुम्पिने परम्परा छ । काेइँच किपटीय मुखिया निरंकुश र हैकमी बन्न पाउँदैनन् । उनीहरु माथि संस्कृति निरन्तरताकाे दायित्व पनि थपिएकाे हुन्छ । त्यसकाे अवशेष अझै प्लेत्तिमा शाँदार गर्दा गुठेर राँगा बस्नेतले बाँधी दिने चलन छ । चन्द्रबहादुर तीनै किपटीय मुखिया थिए । यसैले उनीमाथि गाउँलेको सम्मान देखिन्थ्यो ।
चिसो सिरेटो चल्दै थियो । जम्मा भए गाउँले दाजुभाइ नाचीरहेका थिए । सुनुवार सेवा समाजका उपाध्यक्ष र महासचिव कार्यक्रमबाट नोब्रा हुँदै फर्पु घरतिर लाग्नुभयो । त्यसरी उहाँहरुको आगमन र प्रस्थान २६ सय मिटर अग्लो नोब्राबाट भएपछि हामी (रणवीर सुनुवार, शोभा सुनुवार र मेरो) पनि त्यही बाटो समाउने कि भन्ने कुरा भयो । तर हामीसँग मोटरसाइकालको साथसाथै स्कुटर थियो । कच्ची भर्खरै खनेको लेकको बाटो । त्यसमाथि कोही मानिस नहिड्ने जंगलको ठाउँ । तर हामीलाई कोइँच किपटको दृश्यपान गर्नुथियो । उपाध्यक्ष अमृतले मंसिर १ गते विहानै अध्यक्षलाइ खबर गर्नुभयो “बाटो एकदम सही छ । एकघण्टामा फर्पु आइपुगिन्छ । मोटरसालकलमा चाहिँ एक दुइ ठाउँ कुपिण्डेबाट उकालो आउँदा नोब्रा निस्किनुभन्दा तल ओर्लिनुपर्छ तर स्कुटर चाहिँ के हुन्छ मलाइ अलिकति भेउ भएन ।” त्यसपछि हामीलाई जोश आयो । एकदुइ ठाउँ मात्रै हो भने बोकेर पनि स्कुटर कटाउँछौं । Read More
Posted by: uttam Kaatich | on October 11, 2021
जिन्दगी त किताब रैछ : सम्झनाका फुलहरू नियाल्दा
अरबबाट फारसहुँदै भारतसम्म फैलिएको गजल विधालाई मोतीराम भट्टले वि.सं. १९४० ताका नेपाल भित्राएको भन्ने भनाई अधिकांश साहित्य समालोचकहरूमा भएको पाइन्छ । सुरुसुरुमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेपाली गजल विधा पचासको दशक पछाडि भने निकै नै मौलाएको पाइन्छ । गजल संरचनाको गहन अध्ययनबिना नै मैले पनि अरूको गजल पढे–सुनेकै भरमा एवम् साथीभाइको लहलहैमा गजल रचना गर्न आरम्भ गरेको थिएँ । जानीनजानी रचिएका तीनै गजलहरूको बिटो बाँधेर साठीको दशक प्रारम्भकालमै ‘अभिशप्त आशिष’ नामक गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको थिएँ । सायद यसैले होला प्रस्तुत गजल सङग्रह ‘सम्झनाका पूmलहरू’का गजलकार तारा बहिनीले यसभित्र अटाउने गजलहरू मलाई मेलमार्फत पठाएर भूमिकाको लागि आग्रह गर्नु भएको ।
यहाँनेर गजल सङ्ग्रह ‘अभिशप्त आशिष’ प्रकाशन पछाडि लागेका साहित्यिक ठेसबारे मैले मेरा व्यक्तिगत अनुभूतिहरू उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । सरलार्थमा भन्नुपर्दा तत्काल मैले गजलबारे बुझेर लेख्नुभन्दा लेखेर प्रकाशन गरेपश्चात् बुझ्ने भूल गरेको थिएँ । गजल सङ्ग्रह प्रकाशन भएपश्चात् मात्रै मलाई ती मेरा भूलहरूको महसुस भएका थिए । आदरणीय दाइ मनु ब्राजाकी तथा डा. कृष्णहरी बरालजस्ता दिग्गज दाइहरूको साथ सङ्गतले मलाई महसुस गरायो । गजलका शिर्षपदका दुई हरफ (सेर)लाई गजलको भाषामा ‘मतला’ भनिँदो रहेछ भने यसपछिका सेरहरूलाई ‘मिसरा’ भनिँदो रहेछ । त्यही मतलासँग अनुप्रास मिलाइएर रचिने गजलका अन्य सेरका तुकबन्दीयुक्त अनुप्रासलाई ‘काफिया’ भनिँदो रहेछ । मतलालाई आधार बनाएर रदिफ, काफिया तथा बहर छुट्टाएर गजलको संरचना बन्दो रहेछ । यिनै दिग्गज दाइहरूको सङ्गतले मिसरा–ए–उला, मिसरा–ए–सानी, काफिया, रदिफ, मतला, मक्ता तथा तखल्लुस जस्ता गजलका विस्तृत व्याकरणसम्बन्धि ज्ञान बटुल्ने अवसर पाएँ । तथापि गजल रचना गर्दा मात्रा मिलाएर गरिने बहरसम्बन्धमा म आज पनि अनजान तथा सिकारु नै छु ।
तारा बहिनीको गजल लेखन प्रथम प्रयास यस सङ्ग्रहमा समेटिएका गजलहरू सरसरती हेर्दा केही गजलमा पूर्णअनुप्रास (काफिया)को प्रयोग देखिन्छ भने अधिकांस गजलका सेरहरू प्राय एकाक्षरी वा शब्दांश अन्त्यानुप्रास (काफिया)को प्रयोग भएको देखिन्छ । केही गजलहरूमा सहायक अन्त्यानुप्रास (हमकाफिया)को समेत प्रयोग भएको पाइन्छ ।
तारा बहिनीका गजलहरू सरल भएरै सरस छन् । उहाँका गजलमा प्रेम, कौतुहलता, पीडा, जिज्ञासा एवम् भ्रमजस्ता विषयवस्तुलाई कलात्मक तवरले उनेर सङ्ग्रहको माला तैयार पार्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । गजल जटिल शब्दले भन्दा सरल शब्दले नै सुन्दर र सरस हुने विधा मानिन्छ, जुन यो गजल सङ्ग्रहमा पाइन्छ । लेख्दै नलेखि बस्नुभन्दा केही लेखेर पस्कनु राम्रो हो । यात्रा थालेपछि मात्र गन्तव्यमा पुगिन्छ । जतिजति पाइला चालिन्छ उतिउति नै अनुभव बटुल्न सकिन्छ । अतः तारा बहिनीले गजल विधामा साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ गर्नु भएको शुभ साइतले स्वच्छ, सुन्दर र चुलिन्दा गन्तव्य पाओस् । आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै साहित्यका मीठा घतलाग्दा रचनाहरू पढ्न पाउने अभिलाषाका साथ सफल साहित्यिक भविष्यको कामना गर्दछु ।
फूलबारी नगरमार्ग, कोटेश्वर